भेरी नदीमा हा'म फाल्नु अघि १२ चोटी फोन गर्ने को हो ? खुल्यो ड-रलाग्दो रह-स्य हेर्नुस ( भिडियो हेर्नुहोस) - Onlines Time
भेरी नदीमा हा’म फाल्नु अघि १२ चोटी फोन गर्ने को हो ? खुल्यो ड-रलाग्दो रह-स्य हेर्नुस ( भिडियो हेर्नुहोस)
उपत्यकामा मनाइने ‘येंयाः’ पर्व (इन्द्रजात्रा) शनिबारबाट सुरु हुँदैछ। आठ दिनसम्म मनाइने यो जात्रा शासन सत्ता परिवर्तन भएसँगै परिमार्जन हुँदै आएको छ।
इन्द्रजात्राका अवसरमा मरुटोलमा रहेको मरुसत्तल र सिंल्यंसत्तःको बीचमा अग्लो डबली बनाई चार सिंहमाथि रहेको खटमा डोरीले बाँधेर राखिने इन्द्र सत्ताको प्रतीक मानिन्छ।
आफ्नो पूजा नगर्ने डरका कारण इन्द्रले धर्तीमा अतिवृष्टि गराएर खेतीबाली सखाप पारिदिएका थिए। आफूप्रतिको आस्थामा कमी आउन नदिन कहिले अनावृष्टि गराउने त कहिले अतिवृष्टि गराएर तर्साउँथे। एक दिन आमालाई
वसुन्धराको व्रतका निम्ति पूजा सजाउन स्वर्गलोकका राजा इन्द्र काठमाडौं आए। पारिजातको फूल टिप्न लाग्दा यहाँका किसानहरूले उनलाई चोरको संज्ञादिई डोरीले पाता कसी बीच सडकमै उभाएका थिए। आफूहरूलाई दुःख दिने राजा इन्द्रलाई नियन्त्रण गर्न सकेको खुसियालीमा इन्द्रजात्रा मनाउन थालिएको हो भन्ने किंवदन्ती छ।
इन्द्र देवताको प्रतिकको रूपमा य:सिं (लिंगो) ठ्याइन्छ। यो जात्रा सैयौं वर्षदेखि चल्दैं आएको छ। सास्कृतिक शहर काठमाडौं, भक्तपुर ललिलतपुरमा बिशेष रूपमा इन्द्रजात्रा मनाईन्छ। इन्द्रजात्राको उद्गम स्थल हनुमानढोका दरबार क्षेत्र हो।
यहाँ १२ औँ देखि १८ औँ शताब्दीमा निर्मित थुप्रै मठ मन्दिर छन्। भाद्र शुक्लपक्ष द्वादशीका दिन लिंगो उठाएपछि इन्द्रजात्रा विधिवत् सुरु भएको मानिन्छ। र उक्त लिंगोे वाग्मती नदीमा विसर्जन गरेपछि जात्रा औपचारिक रुपमा समापन हुन्छ।
PrevParas Shah एकाबिहानै मन्दिर पुग्दा प्रहरी नै प्रहरी : ब’न्दु पड्ए’कार सुरु गरियो पुजा Indra Jatra (भिडियो हेर्नुहोस)
Nextविकाश मोक्तान उर्फ सिपिआर टाटु, घरमा छोरीसहित श्रीमती, सिंगल छु भन्दै मोज गर्दै